Salvia Romano oo sheegtay Muslim tahay iyo magac cusub oo ay la baxdey | XORRIYA NEWS
Home Wararka Salvia Romano oo sheegtay Muslim tahay iyo magac cusub oo ay la...
Salvia Romano oo sheegtay Muslim tahay iyo magac cusub oo ay la baxdey
Salvia Constanza Romano oo dhowaan ciidamada Soomaaliya, Turkiga iyo Talyaaniga ay kasoo daayeen gacanta ururka Al-shabaab oo Af-duub ahaan ugu haaystay meel ku dhow caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxay si rasmi ah u sheegtay in ay qaadatay diinta Islaamka.
Waxey caddeeysay in si iskeeda ah ay ugu qancaday diinta Islaamka oo ee sidaas ku noqotay qof Muslim ah. Waxey sheegtay in hadda ka dib magaceedu yahay Caa’isha.
Romanu oo 25 jir ah ayaa laga qafaashay deegaanka lagu magacaabo Chakama oo ku yaalla Koonfur bari gobolka xeebta kulaala ee Kenya bishii November sanadkii 2018-kii.
“Waxey ii xaqiijiyeen in aan la i dili doonin, xaalkuna sidaas ayuu ahaa “ ayeey Romano u sheegtay wakaaladda Wararka Talyaaniga ee ANSA.
Salvia Romano oo sii hadleysay ayaa waxay sheegtay in ay qaadatay diinta Islaamka intii ay Af-duubka u aheyd ururka Al-shabaab, balse aysan la kulmin wax dhibaato ah.
“dhowr goor ayaa la iisoo jeediyay qaadashada diinta Islaamka, la iguma qasbin, bilihii dembe ayaan qaatay, waxay i bareen Qur’aanka weyna ku mahadsanyihiin sidii wanaagsaneyd oo ay iila dhaqmeen. Waxay i bareen wax kamid ah Carabiga, iyo dhaqanka Islaamka, sidoo kalena ma jirin cid aan xiriir wadaagnay amma i guursaday, keliya xushmad Ayaan haaystay” ayeey mar kale u sheegtay Salvia Warbaahinta .
Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay marka laga yimaado ciidamada Soomaaliya in soo furashada Salvia Romano ay garab ku siiyeen sirdoonka waddanka Turkiga, isagoo aad ugu mahad-celiyay.
Hadalka kasoo baxay gabadhan dhowaan lagasoo badbaadiyay gacanta Al-shabaab ayaa wuxuu sii xoojinayaa qoraal iyada ku saabsan oo ay horay u qoreen wargeysyada Talyaaniga oo sheegayay in laga shaki qabo in Romano ay qaadatay diinta Islaamka , iyagoo markaasi wax ka qorayay hab labiskeeda oo ahaa kan ay xirtaan dumarka Muslimiinta ah. Hase ahaatee, hadda ayeey si rasmi ah u sheegtay in ay tahay gabar muslimad ah.